“လာစေသင့်၏ မသင့်၏ ဆွဲဆာင်သင့်၏မသင့်၏ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » “လာစေသင့်၏ မသင့်၏ ဆွဲဆာင်သင့်၏မသင့်၏ “	7
“လာစေသင့်၏ မသင့်၏ ဆွဲဆာင်သင့်၏မသင့်၏ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 14, 2016 in My Dear Diary, Photography |7comments
“လာစေသင့်၏ မသင့်၏ ဆွဲဆောင်သင့်၏ မသင့်၏”
ပြီးခဲ့တဲ့လက ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဓါတ်ဆရာအဖွဲ့နဲ့ သံလျင်တစ်ဖက်ကမ်းက မီးပြတိုက်ကို
မီးပြတိုက်အသွားမှာ ကျိုက်ခေါက်စေတီနားရောက်တော့ ကျနော်က နတ်ရှင်နောင် အုတ်ဂူကို
၂၀၁၂ တုံးက ကျနော်ကျိုက်ခေါက်စေတီကိုရောက်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဂူ ကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး။
အုတ်ဂူ ပါတ်ပါတ်လည်ကိုတော့ သံဆူးကြိုးကာ ထားပါတယ်။
အထဲကို ၀င်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ၀င်စရာနေရာလိုက်ရှာတဲ့အခါ
၀င်စရာအပေါက်တွေ့ပေမယ့် သော့ခတ်ထားတော့ အထဲကိုဝင်လို့ မရပါဘူး။
“ နတ်ရှင်နောင်အထိန်းအမှတ်ဂူ ဘုရား “ဆိုတဲ့ နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း
အခုတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတာကြောင့်
အရင်ကတော့ မရောက်ဘူးတော့ ဘယ်လိုဆိုတာမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။
ကျနော်ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်းမှာဘဲ အဲဒီဂူရဲ့အပေါ်ပေါက်ကနေ ခွေး
ဟိုအရင်တစ်ချိန်တစ်ခါက နတ်ရှင်နောင်အတွက် အငြင်းပွားခဲ့ကြတာကိုတော့
အမျိုးချစ်သူများကတော့ နတ်ရှင်နောင်ဆိုတာ ပေါ်တူဂီလူမျိုးတိုင်းတပါးသားနဲ့
ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖောက်သူလို့ ဆိုခဲ့ကြသလို
ပဒေသရာဇ်မင်းကိုသာ ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ သူ့အနုပညာနဲ့ပဒေသရာဇ်ကို
သူ့ရဲ့အုတ်ဂူပါ အများရဲ့မျက်မှောက်ကနေ ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ရှေးဟောင်းအမွေဆိုတာကို တန်ဘိုးမထားခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပါးတဲ့နေရာက ဘုရားများမှာ တော့ ရှေးဘုရားတွေ
အုတ်ချပ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ တိုင်းတပါးကိုရောက်သွားခဲ့တာအများကြီးပါဘဲ။
ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုတကိုယ်တော် သုတေသီတွေက ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လို့ သိလာရတာပါ။
ကိုယ့် တိုင်းပြည်က ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို ကာကွယ်ဘို့ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရမှာ
တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အဲဒီအရပ်မှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းသူများကလည်း
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို သဘောထားပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်လဲ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ ရွှေတချောင်းအနောက်ဘက်
၂၂စီလမ်းမှာရှိတဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်သချိုင်း ဆိုရင်လဲ ၁၉၈၁ ဆိုင်းတန်းမီးလောင်အပြီးမှာ
နောက်တစ်ခုက ၁၉လမ်း လမ်း၈၀ဒေါင့်က စည်ရှည်တံတား(အများအခေါ်စက်ရှင်တံတား)
ကိုလည်း ဘာအကြောင်းကိစ္စမှမရှိဘဲ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
အချို့သောပစ္စည်းတွေက လက်ရှိမှာအသုံးမ၀င်ပေမယ့် ပြန်လည်အစားမရနိုင်တာကတော့သေချာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးဘုရား တွေ နန်းတော်အဆောက်အဦးတွေအများကြီး
မန္တလေးနန်းတွင်းမှာဆိုရင်လဲ ဘုရင် နဲ့ မိဘုရားရဲ့အုတ်ဂူတွေကခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကြားမှာ
အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ဘုတ်တလုတ်ကန်ဆိုရင်လဲ လူလာချင်စရာမကောင်းအောင်ညစ်ပါတ်နေတာပါဘဲ။
မန္တလေး ပုဂံလို့ ထင်ရှားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲ သီပေါမြို့လို မြို့ငယ်လေးမှာတော့ ပုဂံခေတ်က ဘုရား
ရှိတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေ တကူးတက လာကြည့်တာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေဆိုရင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို စောင့်ရှောက်ထားပြီး နိုင်ငံခြားသားများ
မကြာသေးခင်ကမှ ကျနော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာဆိုရင်
သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟိုချီမင်းရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ဆေးစိမ်ထားပြီး
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားများ ဂါဝရပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိပေးထားပါတယ်။
(ကျနော်တို့နိုင်ငံက အာဇာနည်ကုန်းကိုတော့ အမြဲတံခါးပိတ်ထားတော့ ၀င်ပြီး ဂါဝရပြုချင်တာတောင်ပြုလို့မရ)
တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သဘာဝရူ့မြင်ကွင်းအလှအပတွေ
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် အင်မတန်မှလှပတဲ့ ရေပြာအိုင်တွေ ရေတံခွန်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သွားလာဘို့ ခက်ခဲပြီးအဆင်မပြေပါဘူး။
မန်းလေးမြို့ အရှေ့ဘက် ရဲရွာသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်ဆိုရင်အတော်လေးကိုလှပါတယ်။
အဲတော့ ချော်လဲမှာစိုးရပြီး အန္တရာယ်မကင်းဘူးလို့ဆိုနို်င်ပါတယ်။
ဆယ်ထပ်အမြင့် မှာ အင်မတန်လှပတဲ့ရေပြာအိုင်ရှိပြီး ရေတံခွန်လည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်လောက်လှလှ သွားလာရခက်ခဲမယ် အန္တရာယ်ရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှမသွားပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အလွယ်သွားလို့ရတဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ပွဲကောက်ရေတံခွန်အပါအ၀င်
တရုပ်ပြည်ရွှေလီမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၄၀လောက်မှာ မော်လိရေတံခွန်ရှိပါတယ်။
မန္တလေးကျောက်ဆည်အသွားလမ်းက ရှင်ပင်ဆပ်သွား နဲ့တမုဒ်ရွှေအင်ပင်
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ကြိုးဆွဲရုပ်သေးပညာဆိုတာ ရှေးကျပြီး ထူးခြားတဲ့ပညာတစ်ခုပါဘဲ။
ဒီရုပ်သေးပညာကို မန္တလေးမြို့က ဒေါ်မမနိုင်ငံ မတိမ်ကော မပျောက်ပျက်အောင်ကျားကန်ပြီး
ထိန်းသိမ်းလို့ နေရပေမယ့် မြန်မာပြည်ရောက်လာရင် မဖြစ်မနေကြည့်ရူ့စရာဖြစ်မလာသေးပါဘူး။
ဗီယက်နမ်မှာ ရေပေါ်ရုပ်သေးကပွဲဆိုပြီး တခမ်းတနားနဲ့ပြသပါတယ်။
ကျနော်တို့သွားတဲ့ရက်က နိုင်ငံခြားသားတွေချည်းဘဲ ခန်းလုံးပြည့်ပါဘဲ။
အခုတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ရုပ်သေးက ဟိုတယ်ထမင်းစားခန်းမမှာ
အခြားနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမျိုးတွေ နန်းတော်ဟောင်းတွေမှာဆိုရင်
သူတို့ ရဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အ၀တ်အစားတွေ ရှေးဟောင်းအ၀တ်အစားတွေဝတ်ပြီး
ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ စီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေ နန်းတော်ဟောင်းတွေရှိပေမယ့်
ဒီလိုသာ စီစဉ်ပေးထားရင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအတွက်လဲ ၀င်ငွေတိုး
ကျောက်ဆည်ဘက် က ဓါတ်တော်တောင်
ဘားအံ့ဘက်က ဆန္ဒန်ဂူ ဘုရင့်ညီနောင်ဂူ ကော့ကွန်းဂူ
တောင်ကြီးဘက်က ပင်းတယဂူ မြင်းမထိဂူ ထမ်ဆမ်းဂူ
ပြင်ဦးလွင်က ပိတ်ချင်းမြောင်ဂူ အစရှိတဲ့ဂူတွေကို ကျနော်ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့အတွက်ရောက်ဘူးပါတယ်။
ဒီဂူတွေမှာဆိုရင် အများအားဖြင့် မဲမှောင်စိုစွတ်လို့နေပါတယ်။
အချို့နေရာတွေက ကျဉ်းလွန်းတော့ ခေါင်းမထိခိုက်မိအောင်သတိထားသွားရပါတယ်။
ဗီယက်နမ်က ကျနော်ရောက်တဲ့ထုံးကျောက်ဂူမှာဆိုရင် မီးတွေကို
အဲ့တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အင်မတန်လှပတဲ့အရောင်တွေကိုရပါတယ်။
မီးတွေကိုထွန်းထားတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အလင်းတွေပြန်ပြီးလှသင့်သလောက်မလှတာအမှန်ပါဘဲ။
ကျောက်ဂူခြင်းယှဉ်ကြည့်ရင် မြန်မာပြည်က ဂူတွေက ကျောက်ပန်းဆွဲတွေ
ကျောက်ခက်တွေ ကျနေတာက ပိုပြီးလှပါတယ်။
ကိုယ့်ငါးချဉ်မို့ကိုယ်ချဉ်တယ်လို့ ပြောရင်လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာတွေကို သွားလာဘို့ ခက်ခဲတာကြောင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို
လာရင်တောင်မှ လာတဲ့ အရေအတွက်နည်းပါးပါတယ်။
အဲတော့ အများပြောသလို မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံတွေက နေ ၀င်ငွေကောင်းဘို့အတွက်
ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့် ဘို့ အတွက် သွားလာရေးလွယ်ကူ သက်သာဘို့လိုပါမယ်။
ယဉ်ကျေးမူ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနရယ် ပေါင်းစုပြီး
အလည်သက်သက်လာရောက်သူများအပြင် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ သူတွေကိုလဲ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ လှပ တယ်ဆို တဲ့ နေရာတွေကို လိုက်လံ ရှာဖွေမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့
ဓါတ်ပုံမုဆိုးတွေကလဲ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအတွက် အင်မတန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ဈေးကွက်
ကြီးတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သူတို့ များများလာလေ ကိုယ့် ဒေသထွက်အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းရောင်းရလေ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးလေးပါဘဲ။
“လာစေသင့်၏ မသင့်၏ ဆွဲဆောင်သင့်၏ မသင့်၏”ပြီးခဲ့တဲ့လက ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဓါတ်ဆရာအဖွဲ့နဲ့ သံလျင်တစ်ဖက်ကမ်းက မီးပြတိုက်ကို
Thint Aye Yeik says: .အဟောင်းတွေကိုလည်း …ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ဆိုပြီး…ထိန်းသိမ်းသင့်တာ သိမ်းပေါ့…
တစ်လက်စတည်း… အံ့မခန်းလက်ရာတွေလည်း အသစ် ထွင်သင့်တာပေါ့…။
အဟောင်းချည်းပဲ…ထိုင် ထိန်းသိမ်းပြီး…အဟောင်းချည်းပဲ… အရိပ်တကြည့်ကြည့် လုပ်နေရင်…
.နောင် နှစ်တစ်ရာ ကြာရင်…ဒီခေတ် မျိုးဆက်ကို ပြန် လေ့လာပြီဆိုပါစို့…..
အဲ့ဒီအခါ…သက္ကရာဇ် ၂ထောင်ကျော် ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းဆီက…မြန်မာပြည်ရှိ လူသားတွေဟာ…အဟောင်းတွေချည်း ထိုင်ကြည့်ပြီး…အသစ်တွေ ထွင်မသွားတဲ့မျိုးဆက်….လို့… သမိုင်းကျန်နေမှာ…။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်…ရာ ထောင် တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အုတ်ပုံအကျိုးအပြတ်တွေကိုလည်း…ကြာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းရင်း…တပြိင်နက်….
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့… အံ့မခန်း လက်ရာကြီးတွေကိုလည်း တည်ဆောက် ဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်…လို့…
မှတ်တမ်းကျန်ချင်လိုက်တာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ဓာတ်ပုံမုတ်ဆိုးတွေပြန်ပြောစကားကြားရင်.. တော်တော်ညစ်သွားမယ်…။
နေရာတကာမှာ.. မြန်မာ့သဘာဝအလှကိုဘုရားဆင်းတု.. စေတီတွေ… “ကွယ်နေ”….. သတဲ့..။
ko six says: ကိုပေါက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စားပါဗျာ
အောင် မိုးသူ says: မြန်မာပြည်မှာ မြုပ်ကွယ်နေတာတွေ အများကြီး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အပေါ်ကသဂျီးပြောသလိုပဲ….
uncle gyi says: မြန်မာမှာရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးထိမ်းတာအတော်လိုပါတယ်
ဘုရား စေတီ တွေတည်လိုက်ကြတယ်